Translations by Canonical Ltd in “Xhosa (xh) translation of naut...” : Xhosa (xh) : Template “nautilus” : Zesty (17.04) : Translations : nautilus package : Ubuntu
Translations by Canonical Ltd
Translations by Canonical Ltd in “Xho...
Canonical Ltd has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.
Xa ubonisa inani lezinto ezikwisiqulathi-zifayili
Uhlobo locofa olusetyenziswayo xa kundululwa/kuvulwa iifayili
Amaxabiso anokwenzeka ngla "single" ukindulula iifayili nqokucofa okukodwa okanye "double" ukuzindulula ngokucofa ngokuphindwe kabini.
Omakwenziwe ngeefayili zombhalo ophumezekayo xa zenziwe ukuba zisebenze
Omakwenziwe ngeefayili zombhalo eziphumezekayo xa zenziwe ukuba zisebenze (zicofwe kanye okanye ngokuphindwe kabini). Amaxabiso anokwenzeka ngala "launch" ukuzindulula njengeenkqubo, "ask" ukubuza oma ukwenze ngendlela elula eya kunxibelelwano, kwakunye no"display" ukuzibonisa njengeefayili zemibhalo.
Obona bukhulu bobungakanani bomfanekiso obenzelwe ukutyhila ngokukhawuleza
Imifanekiso kobu bungakanani (ngee-bytes) azinakutyhilwa ngokukhawulezisa. Injongo yesi sakhelo kukuphepha ukutyhila ngokukhawuleza imifanekiso emikhulu enokuthabatha ithuba elide ukulayisha okanye isebenzise iinkumbulo ezininzi.
Bonisa iziqulathi-zifayile kuqala ezifestileni
Ukuba imiselwe kwinyani, emva koko i-Nautilus ibonisa iziqulathi-zifayili ngaphambi kokubonisa iifayile ezisemfanekisweni womqondiso nakokubonakalayo kuluhlu.
Ukulandelelana kohlobo olumiselweyo
Guqula ukulandelelana kokhetho kwiifestile ezintsha
Isibonakalisi sesiqulathi-zifayili esimiselweyo
Ukuba ubonise iifayili ezifihliweyo
Uluhlu lweenkcazelo zemifanekiso ezinokwenzeka kwimifanekiso engumqondiso
Umgangatho wokwandisa womfanekiso ongumqondiso omiselweyo
Umgangatho wokwandisa omiselweyo osetyenziswa kokubonakalayo komfanekiso ongumqondiso.
Umgangatho woluhlu lokwandisa omiselweyo
Misela umgangatho woluhlu lokwandiza.
Misela uluhlu lwemiqulu ebonakalayo kuluhlu lokubonakalayo
Uluhlu olumiselweyo lwemiqulu ebonakalayo kuluhlu lokubonakalayo.
Ulandelelano lomqulu omiselweyo kokubonakala kuluhlu
Ulandlelwano lomqulu omiselweyo kokubonakala kuluhlu.
Inkcazelo yefonti esetyenziselwa imifanekiso eyimiqondiso phezu kwe-desktop.
Umfanekiso ongumqindiso uyabonakala kwi-desktop
Ukuba lento imiselwe kwinyani, umfanekiso ongumqondiso onxulumanisa isiqulathi-zifayili sasekhaya iya kubekwa phezu kwe-desktop.
Umfanekiso ongumqondiso womgqomo uyabonakala kwi-desktop
Bonisa imithamo enyusiweyo phezu kwe-desktop
Ukuba le nto imiselwe kwinyani, imifanekiso engumqondiso enxulumanisa kwimithamo enyusiweyo iya kubekwa phezu kwe-deskop.
Igama lomfanekiso womqondiso wasekhaya we-desktop
Eli gama lingamiselwa ukuba ufuna igama elilumgiselweyo lomfanekiso ongumqondiso wasekhaya phezu kwe-desktop.
Ububanzi beglasi yefestile esecaleni
Ubude obumiselweyo becala leglasi yefestile kwiifestile ezintsha.
Bonisa umgca wokubonisa indawo kwiifestile ezintsha
Ukuba imiselwe kwinyani, iifestile ezisandul' ukuvulwa ziya kubonakalisa umgca wokubonakalisa wendawo.
Bonisa iglasi yefestile esecaleni kwiifestile ezintsha
Ukuba imiselwe kwinyani, iifestile ezisandul' ukuvulwa ziya kubonakalisa iglasi yefestile esecaleni.
Isiqulathi -zifayili Sasekhaya
Bonisa iinkcu_kacha ezithe kratya
Ungawumisa lo msebenzi ngokucofa u-rhoxisa.
(i-Unicode engekho semthethweni)
Igama kunye nomfanekiso ongumqondiso wefayili.